15 ruux oo ku dhintey dab ka kacay suuq kuyaala Magaaladda Nairobi. | Hadalsame Media
Home Wararka 15 ruux oo ku dhintey dab ka kacay suuq kuyaala Magaaladda Nairobi.
15 ruux oo ku dhintey dab ka kacay suuq kuyaala Magaaladda Nairobi.
(Muqdisho) 28 Juun 2018 – Dab xoogan oo saaka qabsaday suuq ku yaala bartamaha Magaaladda caasimada ah ee Nayrobi ee dalka Kenya ayaa dilay 15 qof iyadoona ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 70 ruux oo kale.
Boliiska ayaa sheegay inay baarayaan sababta rasmiga ah ee danbeysa in dabkaani kaco, waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha nafeed ka bato inta hadda la ogyahay.
Gurmad xoog leh oo dadka xaafadaha ka dhaw goobta dabku ka kacay ay sameeyeen ayaa la sheegay in lagu badbaadiyey hanti badan
Gaadiidka gurmadka deg deg ayaa la arkayey iyagoo gadaal iyo hore u cararaya waxaana Cusbitaalada Magaaladda la dhigay dad qaba dhaawacyo halis ah oo ka dhashay dabkaan.
Hanti badan oo lagu qiyaasey boqolaal kun oo dollar ayaa ku basbeelay dabkaan sida ay sheegeen warbaahinta gudaha Kenya.
Previous articleWAR CUSUB: Yurub oo maanta ka doodaysa in ay tillaabo ciidan ka qaadi karaan dalal ay Afrika ka mid tahay!
Next articleItoobiya oo maanta soo saaraysa 450 fuusto oo shidaal ah (Dadka degaanka oo khayraadkooda ka qatan)